सार्वजनिक भयो अस्मिता कार्कीको बयान, के भनिन् उनले ? पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौ, २ भदौ । प्रहरीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृ*त्यु प्र*क*र*ण अनुसन्धानका निय*न्त्र*णमा लिइएका रवि लामिछानेसहित अस्मिता कार्की र युवराज कँडेलमध्ये दुई जनासँग आज बयान लिएको छ ।
गत ३० साउन २०७६ मा काठमाडौंबाट निय*न्त्र*णमा लिएकी अस्मिता कार्की र ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका संवाददाता युवराज कँडेलसँग प्रहरीले आज बयान लिएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार युवराजसँग लिखित र अस्मितासँग भिडियो बयान लिइएको छ । प्रहरीसँगको भिडियो बयानमा अस्मिताले सडक दु र्घ टनामा मृ त्यु भएका आफ्ना पूर्वप्रेमीसँग अनुहार मिलेकाले शालिकरामलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी बन्न अनुरोध पठाएको बताएकी छन् । फेसबुक चलाइरहँदा शालिकरामको फोटोसहित ‘पिपुल मे यु नो’ भन्ने देखेपछि अनुरोध पठाएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘फेसबुकमा साथी भएपछि कुराकानी हुन थाल्यो । त्यसपछि निकटता बढ्यो’, अस्मिताले प्रहरी बयानमा भनेकी छिन्, ‘पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धमा थियौं ।’
युवती र सिधा कुरा जनतासँगबीच छलफल भएको बिषय समेत अस्मिताले बयानमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
कंडेलले बयानमा के भने भन्ने बारेमा भने प्रहरीले अहिले नै बताउन नचाहेको स्पष्ट पारेको छ ।
दिल निशानी मगरको गर्जन : रवी लामिछानेलाई हिरासतमा नराखेर होटलमा राख्ने ? ज्ञानेन्द्र शाही दलाल हो (पुरा भिडियो)
काठमाडौं, ३ भदौ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आ*त्मह*त्या दुरुत्साहन अभि*योगमा प*क्राउ परेका रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की तीनैजनालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत चितवनले आदेश दिएको छ ।
यहि विषयलाई लिएर लामिछानेको पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिबक्ताहरुले अहिले आकस्मिक ब्रिफिङको आयोजना गरेका थिए । गत हप्ता शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछानेसहित ३ जनालाई यसअघि पनि अदालतले ५ दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
पुडासैनी प्रकरणमा रबि लामिछानेलाई हिरासतमा लिन नहुने भन्ने समर्थकको मागको विषयलाई लिएर पत्रकार दिल निशानी मगरले आफ्नो विचार राखेका छन । मगरले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जो कोहि पनि संबिधान र कानुन भन्दा माथि नहुने जिकिर गरे । रबि लामिछानेलाई पुडासैनीले दोषी भनेर भिडियो छोडेर गएपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु कुनै गलत नभएको मगरको ठम्याई छ । पुरा भिडियो तल हेर्नुहोस ।https://youtu.be/qM0fprDpKiI